Habka aan wanaagsanayn ee Soomaalidu u isticmaasho baraha bulshada! W/Q: Axmed Sulaymaan – Radio Daljir
Habka aan wanaagsanayn ee Soomaalidu u isticmaasho baraha bulshada! W/Q: Axmed Sulaymaan
Luulyo 10, 2018 7:00 b 0
Habka Aan-Wanaagsanayn Ee Soomaalidu u Isticmaasho Baraha Bulshada!
Shabakadaha ay bulshadu ku wada xiriirto ee loo yaqaan Baraha Bulshada (Social Media) sida Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, SnapChat iwm ayaynu waxyar ka oranaynaa qaabka aan fiicnayn ee baryahan dambe bulshadeenu u isticmaasho.
Shabakadahaan ayaa markii hore loo asaasay inay bulshadu ku wadaagto wararka , fikrdaha iyo macluumaad wanaagsan oo ay danaynayaan inay islawadaagaan balse waayadaan dambe waxay noqdeen meelaha ugu waaweyn ee lagala dagaalamo bulshada dhaqankeeda,diinteeda, Afkeeda, xasiloonideeda siyaasadeed iyo xitaa habfikirkooda ummadeed.
Qormadaan aadka ugaaban waxaynu ku eegaynaa Habka ama qaabka Aan-Wanaagsanayn Ee aynuu Isticmaalno Baraha Bulshada iyo sida saxda ah ee aytahay inaynu u isticmaalo shabakadahaan saamaynta labada dhinac ah leh.
Diinta iyo Dhaqanka
Dhaqanku waa habka bulsho meel dagani unooshahay sida habka labiska,guurka, cuntada, ixtiraamka iyo aqlaaqiyaadkooda IWM. Qaabka aynu u isticmaalo Baraha Bulshada khaasatan qaabka ay u isticmaalaan dhalinyaro badani waxay inta badan kasoo horjeedaa dhaqankeena suuban iyo diinteena islaamka waxaa jira baryahaan dambe group-yo badan oo aad is oranayso waxaa loosamaystay inlagu la dagaalamo bulshadaan diinteeda iyo dhaqankeeda ama Soomaali diinta kabaxday halahaato ama qolyo kale oo ujeedoonyin fog-fog leh halahaadaan, tusaale waxaad arkaysaa dad soodhigaya Facebook-group aykujiraan kumanaan qof su’aalo ama faalo laxiriira galmo, Ama muuqaal dad samynaya anshax-xumo mararka qaar sawir qaawan ama gabdho qaawan oo la dulsaaray sheikh kahadlaya xijaabka ama asturnaanta dumarka iyo waxyaabo lamid ah!! markaas baa waxaa kajawaab celinaya/ka-faaloonaya boqolaal qof oo rag iyo dumarbaleh haba ubadnaadeen dhalinyaro.
Hadaba waamaxay dhaqanka noocaan ahi? Miyeynaan ahayn ummad dhaqan iyo diinleh? Waligaa ma isweydiisay ujeedka barnaamijyada noocan oo kale ah kadamaysa? Mise waxaad u aragtaa wax ah shactiro ama ilaqosol oo kale?
Hadaan sii eegtid ujeedka fogiee barnaamijyada noocaan ahi waa inay dadku aakhirka waxyabahaan u arkaan wax iska caadi ah oo aan ceeb ahayn.
Waagi hore Soomaalida meelahaas baa looqaadi jiray kadibna waxay qaarkood imaanjireen iyagoo dhaqankii ama diintii ka yara leexday markaas waxaynu ugu yeeri jirnay “Dhaqancelis” maadaama uu dhaqankii asalka uu ulahaa uu dhumiyey. Baryahaan dambe waxaad arkaysaa dhalinyaro aan wadanka kabixin degaan kay rabaan haka joogaan wadanka lakiin u dhaqmaya qaab kaxun qaabki ay udhaqmayeen kuwii dibadaha dhaqanku kaga soo dhumay. Ma is weydiisay sababta? Mise adiga waxayba kuula muuqataa iska caadi?
Markii laysku soo ururiyo ujeedka group-yadacaynkaan oo kale ah waa inlahelo dhalinyaro badan oo wadanka joogta oo aan iyagoo waxbadan oo maal ama waqti ah lagu dhumin kataga dhaqan kooda ama xitaa diinta. Arintaan Inbadan waxaa macquul ah inaad iiga xogroontihiin.
Axmed Sulayymaan (Qoraaga Maqaalka)
Waa inaynu ogaano in horumarka iyo dib udhaca ummad walba ay horseed uhiyiin dhalintu sababtu waxa weeye dhalintu:
Waa dadka ugu badan wadan walba maanta oo aynu inagu uhorayno.
Waxay hayaan tamar/xoog furan iyo waqti firaaqo ah oo dadka dhexe iyo kuwa waaweyn aysan haysan
Waxay intooda badani leeyihiin aqoon heerkay rabtoba ha ahaatee (wax badan ayey gudbin karaan)
Waxay aad ugu xiranyihiin baraha bulshada iyo waxyaabaha ka dhacaya dunida
Hadaba dhalinta waxaa waajib ku ah inay noqdaan kuwo uhorseeda ummadooda horumar iyo baraare iyagoo kafaa’iidaysanaya qodobadaas aan kor kuxusnay.
Xogaha khaas-ka ah
Waxaa muhiim ah inuu qofwalba ilaashado xogihiisa isaga u khaaska ah sida sawiradiisa, kuwa qoyskiisa iyo asxaabtiisa. majirto diin ama dhaqankuu banaynaya inaad baraha bulshdada soodhigto sawiradaada ama kuwa reerkaaga oo aan asturnayn. Marka fadlan hashaqaysan dadbi ama ceeb aad adigu masuulkatahay.
Qofwalba ayaa diinta iyo dhaqanka mas’uuliyad kasaarantahay ma ahan in wadaad iyo oday dhaqameed loo xagliyo mas’uuliyada Dhaqanka iyo diinta. Dhanka kale Habluhu waxay kasaamayn badanyihiin ragga markii laga hadlayo dhaqanka hadaba sikhaas ah gabdhuhu waa inay u ilaashadaan sharaftooda, sawiradooda waa inaysan ku Aaminin sharafteeda iyo xogaheeda cidkale waa inaad ogaataa inaynu kunool nahay duni ixtiraamka iyo amaanadu kasii tabar go’ayso.
Isticmaal baraha bulshada lawadaag asxaabtaada farxadaada iyo wixii kale oo muhiim ah laakiin fadlan ilaali waajibaadka aad xambaarsantahay.
Baraha Bulshada iyo isbadbaddelka tiknoolajiyadu waxay saamayn ba’an kuhayaan Afafka ummadaha soo koraya ee luqadahoodu saamayn weyn kulahayn dunida. Qolyaha qaabilsan afafka iyo dhaqanka waxay afkeena kutiriyaan afafka siidabar go’aya. Marka laga yimaado doorki dowlada ee badbaadinta afka iyo dhaqanka oo aan sifiican ushaqaynayn waayadaan dambe hadana waxaa qaybka ah tabar go’a afka hab dhaqanka bulshada khaas ahaan dhalinta oo aan wax hiil ama ixtiraam ah aan siin afkooda hooyo. Baraha bulshada ayaa ah meelaha ugu balaaran oo uu ka socdo ladagaalanka afku.
Waxaad baryahaan dambe arkaysaa xarfo aan kujirin qoraalka xarfaha Af-soomaaliga oo loo isticmaalayo Baraha bulshada sida Z,P,V (Zaaxiib, Qalpi, Varsamo) iwm. Markii laga yimaado xarfahaas labaddelay waxaa intaas dheer in dhalintu intooda badan markay waxsoodhigayaan baraha bulshada ay adeegsadaan luqadda Ingriiska “English” oo haatan ah luuqad saamayn xoogan kuleh wadanka dadkuna u arkaan shuruud lagarabo qofwalboo waxbartay.
Waxad arkay saa qof mas’uul Soomaliyeed ah oo lahadlaya dad soomali ah lakiin wuxuu kulahadlayaa Af-Ingiriis.
Waxbaa dhacaya sida qaraxyo oo kale midbaa baraha bulshada kusoo qoraya Breaking news“ two Huge explosions just heard in x-town Somalia” yaad usheegaysaa warkaan? Miyaadan ogayn inaad sumcad xumo ka gudbinayso dalkaaga oo ay macquul tahay kumanaan dad ah oo aan wadankaaga udhalan ama jeclayn horumarkiisa inuu warkaagu gaari karo. Hadaad rabto inaad ogaysiiso qaraabadaada ama asxaabtaadaoo halkaas wax kadhaceen kadhow ugu sheeg luqadaada.
Dunida waxyaabaha kadhaca maalin kasta haddii lagaaga sheekeeyo mamalayn karaysid laakiin mamaqasho waxyabaha kadhaca intooda badan halka wax yar haday wadankeena kadhacaan qof walba uu ogaado waxaynu nahay dad aan waxba u qarsoonaynoo aan sir wadan lahayn siduu lahaa Abwaankeenii waynaa ee Jaamac Kadiye“…Sawaxiligaa udhow, Zanawi (Abiy) dalkuu xukumo, Sudaan iyo Liibiyiyo, zimbabwi iyo Muuzabiig, Zaabiya iyo Kini-bisow ama Saharaha galbeed, Sentaraal Afrikaanka iyo waliba suud nimanka xiga, Sanciyo Soonaha Cumaan, Masaarida reer Suways, Sucuudiga Xaramku yahay, Saldanadii reer Kuweyd….Intuu sanku neefle yahay sirteenii bay wadayahaan, ceebteenii baasuuqa waran. Dadkeeniibaa siiladaha sanuud lagu baayacaa”!!!!
Dadyowga kale ee caalamku see u isticmaalaan Baraha Bulshada?
Iyadoo ay adagtahay in la ilaaliyo waxyaabaha lagu qorayo shabakadaha bulshada iyo sida qofku ufakarayo hadana waxaad mooddaa in dadku intadan qarsadaan ciladahooda khaaska u ah markii loo eego inaga. kala duwanaashada noocaas ah waxa keeni kara Nidaamka dowlada meeshaas kajirta, Heerka aqoonta dadka, Heerka Firaaqada iyo Shaqala’aanta Bulshadaas amaba Habdhaqanka bulshadaas ay khaaska uleedahay.
Muddo hadda laga joogo labo asbuuc ayaan kaqayb kalay wadankan Ugandha xaflad qalin jabin oo uu joogay madaxweynahan wadankan Ugandha Madaxweyne Museveni. Inkastoo khudbadaha goobta laga aqrinayey ay waxbarasho ubadnaayeen lakiin masuul kahadlayey xaflada ayaa yiri “Mudane Madaxweyne waxaan rabaa anoo aan waxcabsi ah dareemayn inaad ku iraahdo waadku mahadsantahay xirida Mr. Hebel waayo naftayada ayaa khatar kusugneyd”.. katib halmar dad dhowr kun gaarayey oo xaflada joogay ayaa qayliyey oo sacbiyey. Anigu waan yaabay runtiina sheekadaan horay ulama socon. Gabar dhinacayga bidix fadhiday ayaan ku iri muxuu ahaa ninkaas laxiray. Siyaableh ayey iitiri oo ma ogid miyaa in Mr. hebel waxaas lagu eedeyey oo laxiray? Katib waxaan usheegay inaanan waxba kala socon deedna waxaan ka codsaday inay ilawadaagto sheekada oo dhan weyna iga yeeshay… Ninku waa nin cidwalba taqaano oo caan ah waana madaxda ciidamada heer qaran. Waxaan kujiraa Group-yo badan oo Facebook-yo ah wadankaan, waxaan kuleeyahay sidoo kale asxaab badan laakiin cidna kuma aysan soo dhigin sheekadaan baraha bulshada af-qalaad.
Waxan is weydiiyey inaga nin maqaamkaas dowladda ka jooga hadii xabsiga ladhigo siday sheekadaani uqabsanlahayd Baraha Bulshada.
Wa maxay xalku?
Ilaalinta Af-keena Hooyo: waa waajib ina saran dhamaanteen inaynu ilaalino luuqadeenaa dowlad iyo shacabba.
Horumarkeena:Haddii aad kahadlayso wax wanaag iyo horumar ah sida xarun bulsho oo ladhisay, Waxbarasho, Maamul wanaag lasameeyey, iskaashi bulsho oo miro dhalay iwm anigu dhib uma arko inaad ku qorto Af-qalaad sababtuna waxa weeye waxaynu ahayn wadan inbadan kamaqnaa ama aan sifiican ugu luglahayn horumarada aduunyada kadhacayey markaas waxaynu ubaahanahay inaynu badelno fikradihii xumaa ee caalamka kale inaga haystay inagoo kulahadlayna luqadahooda.
Iinteenna: waxa ceeb ah inagoo kahadlayna mushkiladaheena oo isticmaalayna Af-qalaad inaynu dadka lawadaagno ceebaheena sida khilaafaadka inaga dhexeeya, dadkeena aan wanaagsanayn habdhaqankooda, dhibaatooyinka aynu inagu isugaysano iyo wixii lahalmaala. taasi waa inagu ceeb waana inaynu joojino.
Luuqada Ingiriiska: Dadbadan oo dhaliyaro yar-yar ubadan ayaa aaminsan luuqadda Ingiriiska qofku hadduu kuhadlo inuu aqoonyahan yahay taas oo ah runtii fikir aan saxnayn inkastoo arintaan luqaduhu ubaahanthay siyaasad dowladeed hadana waxaa muhiim ah inaynu fahamno “Inuu Ingiriisku yahay luuqad ee uusan ahayn cilmi”.
Baraha Bulshadu waa meelaha ugu waaweyn ee lagusoo bandhigo aragtida bulshada “dareenka dadka” waxayna saamayn weyn kuleeyihiin siyaasadaha wadan walba. Waana meelaha haatan madaxdu ka eegaan sida loo arko go’aamada ay gaareen.
Waa wax aad u fiican in muwaadinku kahadlin karo dareenkiisa iyo kan bulshadiisa isagoo wixii fiican ee dowladiisu qabatay ku amaanaya silamid ah taasna wixii qalad ah oo dowladdu sameysona uu fikirgiisa ka dhiiban karo isagoo dowladda saxaya.
Hadaynu dhinafiican ka eegno baryahaan dambe waxaad mooddaa inbadan oo inaga mid ahi iyagoo isleh dowladda saxa inay wax kharibayaan. Waxaan u arkaa inbadan oo ka mid ahi inay baal marsanyihiin qaabka waxloo mucaarado. Inlakala aragti duwanaado waa wax fiican waliba waxay aad ugu fiicantahay dowladda inay hesho dad mucaarad ku ah waa wax aad ugu fiican xukuumadda. Xigmad ayaa oranaysa “Hogaamiyuhu marka uu kushaqaynayo meel uu aad uga helayo oo wax caqabad ahi kahor imaanayn waxay ubadantahay inuusan waxqabad fiican qaban lakiin wuxuu qabtaa waxyaabo aan caadi ahayn “aad u waaweyn” markuu kushaqaynaayo meel ay jiraan caqabo kahor imanaaya”. Haddaynu rabno inaynu wax mucaaradno waxaa muhiima inaynu barano qaabka saxda ah ee wax loo mucaarado, waa inaynu akhrinaa buugta milaayiinta kor udhaaftay ee kahadlaysa hogaaminta iyo qaabka loola dhaqmo aragtiyaha kuwaaga kaduwan. Inaynu dadka madax inoo ah cayno, sawiradooda jarjarno, magacyo qaldan ugu yeero iyaga ama dowlad taasi waa aqoon daro inahaysa lakiin ma’ahan mucaaradnimo.
Ma’ahi shaqaale dowladeed lakiin dhowr iyo labaatan sano oo aanjiro dowlada hadda jirtaa waa dowladii ugu wanaagsanayd ee aan arko. Dowladu waxay samayn kartaa khaladaad waana dabeecadda shaqada inaad qalad samayso. Lakiin waa inaynu ogaanaa in Soomaaliyada qof walboo muwaadin ahi doonaayo inuu arko aysan ahayn wax bilo iyo sanado kooban lagu gaari garo.
Waxa macquul ah inaad aragto muwaadin soo qoraya dowlada nabar iyo naxdin iyo waxla lamid ah lakiin aad ugu qanacsan soomaalinimadiisa rajaynayana inuu dalkiisu horumargaaro markaas waxaa kuusoo baxaysa inay jiraan waxyaabo badan oo bulsho ahaan aynu ubaahanahay inaynu fahamno oo iska saxno.
Waa inuu gorowsado qofwalba oo Soomaali ah meeshu rabo baasaboor hakahaysto wadamada dariska, Carabta ama wadamada Galbeedkainuusan sharaf iyo ixtiraamkii ay Soomali lahayd ama tan qof wadankale kasocda lasiiyo inuusan dunida kahelayn ilaa aynu lahelo dowlad Soomaaliyeed oo maqaamka dowladaha caalamku joogaan oo kale joogta maahane.
Ummada Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay baraha bulshda dowladooda ka caayin lakiin ay u isticmaalaa shabakadaha bulshada inay ku muujiyaan wanaagooda, sharaftooda, isku duubnidooda iyo horumarkooda. Waa inaynaan u adeegsan baraha bulshada meelo dowladda laga caayo oo xasrado lagaga kiciyo. Hadaynu baraha bulshada kadhaliilayno dowladdeena Waa inaynu uga hadalno qaab hufan oo cilmiyeysan.
Inkastoo ay muhiim inoo yihiin baraha bulshadu oo aynu ku kala warqaadano, kulaqaadano waqti asxaabteena ku kala nool daafaha dunida hadana Baaritaano (Cilmi baaris) kala duwan ayaa sheegaya baraha bulshada oo loo isticmaalo si xad dhaaf ah inay leeyihiin saamayno aan wanaagsanayn oo qofka kuyimaada.
Garaadka-qofka: Wadamada soo koraya oo aynu kamid nahay Shaqala’aanta oo aad usareysa, nidaamkooda waxbarasho oo fudud iyo bulshadooda oo aan aad ugu badnayn dhanka wax aqriska owgiis dhalinyartu waxay waqti badan galiyaan oo isku mashquuliyaan baraha bulsha taasi waxay sababtaa hurdada oo aad uguyaraada qofka taas oo qofka ku keenta xusuustiisa oo yaraata. Baraha bulshada ayaa ah meel inta badan aysan ku badnayn ama lasoo dhigin waxyaabo qofka ukeenaya inuu maskaxdiisa kashaqaysiiyo oo uu kafagaro. Tan oo keenaysa inuu qofka kuyaraado hal abuurku maadaama uu yahay mar uu kujiro baraha bulshada iyo mar uu kafagarayo inay dhaafaan waxyaabo muhiim ah oo lasoo dhigayo baraha bulshada.
Waxa macquul ah inaad aragto asxaabtaada baraha bulshada oo aad uga hadlaya qof labiskiis, qaabka uu wax ucuno iwm. Dhowr cisho kahor ayaa facebook ku arkay fariintan “Haye, qolyihii maye(…) sheekadaan ila eega Raisul wasaaraha Itoobiya wuxuu kutagay Jabuuti Fitishaari iyo Kabo buud ah oo xarigu ufuranyahay” waxa macquul ah inaad isweydiisay maxaa micno-kujira hadalkaan.
Waxaa muhiim ah inaynu kafakarno waxa aynu bulshada lawadaagaynu oo hadaysan wanaag inoo lahayn aynu iska dhaafno.
Waa muhiim inaynu helno waxyaabo ila qosol ah ama nashaadaad inoo ah lakiin waa inaysan ahayn wax wax udhimaya diinteena, dhaqankeena ama garaadkeena.
Saamaynada kale aan-wanaagsanayn ee Baraha Bulshada waxaa kamid ah:-
Waxay qayb kaqaadataa khilaafka iyo hoos udhaca xiriirka qoyska
Xishood la’aanta Qofka
Kharash farabadan oo qofka uga baxa qaab uusan filanayn iwm
Waqti dhumis badan
Dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku taxan Baraha Bulshada waa inay noqdaan dhalin yaro maskax furan, Masuuliyad weyn iska saara Diintooda, Dhaqankooda, Af-kooda, Dadnimadooda iyo Caafimaadkooda. Waa inaysan inoo noqon Baraha Bulshadu meel laynagu mashquuliyo oo aynu ku seegno Aduunkeena iyo Aakhiradeena.
Ugu dammayntii waxaan kusoo khatimin qoraalkayga xadiiskii Rasuulkeena “SCW” ee ahaa “Qofkii Rumeeyey Alle iyo Maalinta Aakhiro Khayr Haku Haldo ama Hayska Aamuso”.
W/Q:Ahmed Hussein Suleiman